WhatsApp ကိုအခမဲ့နှင့်ပိုမိုလုံခြုံမှုနှင့်အတူအခမဲ့6| Androidsis
WhatsApp ကိုအခမဲ့နှင့်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ၆ ခု
Francisco Ruiz | | Android application များ, Whatsapp
ဒီကနေ့အကောင်းဆုံးစာရင်းကိုမင်းတို့ယူလာချင်တယ် လူကြိုက်များသော WhatsApp application ကိုအစားထိုးရန် application များ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များနှင့် chat သို့မဟုတ် video call ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌မူအရသင့်အားအစားထိုးရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများကိုအကြမ်းအားဖြင့်တင်ပြလိုပါသည် WhatsApp ကို။ မကြာခင်မှာပဲသင့်ကိုဤနေရာတွင်ဆွေးနွေးတင်ပြထားသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်သင်ပေးပါလိမ့်မည်။
2 Facebook က Messenger ကို
5 ဝါယာကြိုး - လုံခြုံရေးဆိုတာကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားဖြစ်တယ်
6 Skype ကို
La Telegram သည်ဒေသအတော်များများ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အကျင့်ပျက်မှု ၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မှာလက်တင်အမေရိကနှင့်စပိန်တွင်နေ့စဉ်သုံးစွဲသူပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ နှင့် ၄ င်း၏အရေးကြီးသောလက္ခဏာများကြောင့်နေ့စဉ်သုံးစွဲသူအသစ် ၇၀,၀၀၀ ရှိသည်။
ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် application တခု၊ privacy ကိုအာရုံစူးစိုက် ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အထူးအခန်းများသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် multiplatform cloud-based service ဖြစ်သည်။ 1GB ဖိုင်များသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူ ၂၀၀ အထိရှိသောအခန်းများကိုပို့ခြင်းအပြင်အရေးအပါဆုံးလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
App တစ်ခု အလားတူအလုပ်လုပ်တယ် Facebook ကပိုင်ဆိုင်ပေမယ့်အချို့နှင့်အတူ app ကိုမှ ပိုကောင်းတဲ့ privacy optionsမကြာသေးမီကမွမ်းမံခဲ့သည် Self- ဖျက်ဆီးသောမက်ဆေ့ခ်ျများကဲ့သို့.
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စမတ်ဖုန်းတွင်သုံးနိုင်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းကွန်ပျူတာအတွက်လည်းဗားရှင်းတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ်စမှာစဉ်းစားရန်အလွန်အဆင်ပြေခြင်းနှင့်စွယ်စုံ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အကောင်းဆုံးစာပို့ app ကို ငါတို့စျေးကွက်ထဲမှာရှိနေတယ်။ အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တယ်၊ ကြော်ငြာမရှိဘူး၊ ဘာမှမပေးရဘူး။
Telegram သည်အစကတည်းက multi-platform application တစ်ခုဖြစ်သည်တယ်လီဂရမ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများနှင့်အုပ်စုများကိုအဆင်ပြေစွာလိုက်နာနိုင်ပါသည်။ အဲဒါကိုထိန်းသိမ်းတဲ့သူတွေရှိတယ် Telegram သည် WhatsApp ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Telegram သည်အသုံးပြုသူအားမည်သည့် format နှင့်မည်သည့် format နှင့်မဆိုဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းပေးသည် WhatsApp ထက်ပိုပြီးအင်္ဂါရပ်များနှင့်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိသည်။
ဒါ Facebook မှလာသည့် messaging application။ ၎င်းကို Facebook အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အခြားသီးခြားလွတ်လပ်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအဖြစ်တရားဝင်ခွဲထားသည့်အတွက်ဒေါင်းလုပ် (၄၁) သန်းကျော်ရှိသည်။ အမှန်တရားမှာ Messenger သည်တယ်လီဂရမ်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည့်အရာတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်း၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်ကောင်းသည်။
ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများတွင်ရရှိသောအရည်အသွေးနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့သည်ထင်ရှားသည်။ ၄ င်း၏လည်ပတ်မှုအများစုသည်အင်တာနက်အချက်ပြအရည်အသွေးပေါ်မူတည်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်း 4G ကိုပင်ဆွဲယူခြင်းဖြင့်သူသည် solvent နည်းလမ်းဖြင့်ကာကွယ်သည်။ များစွာသောသူတို့ထင်သောအရာကိုဆန့်ကျင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook အဆက်အသွယ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရုံသာမကဒါကြောင့်ဖြစ်လျှင်၎င်း၏အစအ ဦး ၌ပေမယ့်။
Messenger နှင့်အတူ သင်၏ဖုန်းစာအုပ်ရှိအဆက်အသွယ်များသို့စာများပို့နိုင်သည်။ Messenger မှတဆင့်ဆက်သွယ်လိုသောအဆက်အသွယ်အသစ်တစ်ခုကိုစာရင်းပြုစုရန်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပါ။ အခြားသူများနည်းတူဓာတ်ပုံနှင့်ဖိုင်များကိုလည်းလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ အသံမက်ဆေ့ခ်ျများကိုလည်းသင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်
ရေးသားသူ: Meta Platforms Inc.
အာရှလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးကုမ္ပဏီကြီးသည်ကြီးထွားလိုပြီး၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးအခွင့်အာဏာကိုရယူထားသည်။ ယခုအချိန်တွင်သုံးစွဲသူများ၏ကြီးမားသောအသိုင်းအဝိုင်းရှိနေပါသည် WeChatနှင့်နောက်ကွယ်မှကုမ္ပဏီ app ကို ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်“ artists ည့်သည်အနုပညာရှင်” များနှင့် ပို၍ ပင်ကြီးထွားအောင်ပြုလုပ်ရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။
ဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ ငါတို့ရှိသမျှသည်အကြောင်းကိုသိသောအရာကိုအပြင် WhatsApp ကို, WeChat HD ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုလုံးဝအခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြင်မည်သည့် browser နှင့်မဆိုသဘာ ၀ ရှိသော web version တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်မက္ကဆီကန်သုံးစွဲသူများ၏ကြီးမားသောအခြေစိုက်စခန်းသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုမြင့်မားသောစျေးကွက်တွင်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ WeChat.
WhatsApp ကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးဂန္ထဝင်အခြားနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာစာရင်းထဲတွင်မပါ ၀ င်နိုင်ပါဤကိစ္စတွင်တရုတ်မှလာသည်။ ထို့ကြောင့် Huawei ဖုန်းသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့ Android သို့မဟုတ် ARK Os ကိုဖုန်းတွင်သုံးသည်ဖြစ်စေအမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဤသဘောမျိုးဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏လူကြိုက်အများဆုံး messaging application ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းကိုမက္ကဆီကိုမှအသုံးပြုသူများစွာရှိသော်လည်း၎င်းကိုစဉ်းစားရန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်တင်ပြသည်။
၎င်းသည်သီးသန့်အုပ်စုလိုက်စကားပြောခြင်း၊ ခေါ်ဆိုမှုများ၊ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအပြင်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုခွင့်ပြုသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့် WeChat သည်အခြားသူများစွာ၏ဒြပ်စင်များပေါင်းစပ်ထားသော်လည်း messaging app တစ်ခုနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုကဲ့သို့လုနီးပါးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် WhatsApp အတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို download လုပ်ယူသည်အတွင်း (optional ကို) ဝယ်ယူမှုရှိပါတယ်ပေမယ့်။
Line ကိုစတင်သောအခါ WhatsApp ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်ဟုပင်ထင်ခဲ့ကြသော်လည်းများစွာသောမျှော်လင့်ချက်များရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့သည်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များထည့်သွင်းထားသောကြောင့်အဆုံးတွင်အလေးချိန်ရှိသော application တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်သည် ဤသူသည်မရှိခဲ့ဘူးရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် သူ့ကိုစောင့်ဆိုင်းသောကြီးမြတ်အောင်မြင်မှု။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်၎င်းကို၎င်း၏တာ ၀ န်နှင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် application တစ်ခုဖြစ်သည် အချို့ဒေသများတွင်အလွန်ကြီးစွာသော reception ည့်ခံရှိခြင်း ၎င်းသည် WhatsApp အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင်၌ရောင်းချသောစတစ်ကာများသည်၎င်းကိုခွဲခြားရန်အသေးစိတ်အချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းစာပို့ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုမှမျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးချဲ့သည်။
Line သည် WhatsApp အတွက်လူသိအများဆုံးရွေးချယ်စရာနောက်တစ်ခုဖြစ်သည် စျေးကွက်မှ, ယခုနှစ်အနည်းငယ်များအတွက်ရရှိနိုင်စျေးကွက်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည် ဒီလျှောက်လွှာမှာငါတို့ဟာဒီစျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းမှာရှာတွေ့သောလုပ်ငန်းဆောင်တာအများစုရှိသည်။ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သီးသန့်သို့မဟုတ်အုပ်စုလိုက်စကားပြောနိုင်သည်။ အုပ်စုလိုက်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများတွင်သူတို့ကလူ ၂၀၀ ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာထားခွင့်ပြုသည်။ ဤကိစ်္စတွင်အသုံးပြုသူအနည်းငယ်အသုံးပြုသောလုပ်ဆောင်ချက်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ၎င်းတွင်အချိန်ဇယားတစ်ခုရှိသည်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။ ထို့ကြောင့် Huawei စမတ်ဖုန်းများတွင် WhatsApp ကိုအမှန်တကယ်ပိတ်ဆို့ထားလျှင်၎င်းသည်နှစ်ခုလုံးသောဝန်ဆောင်မှုများကို application တစ်ခုတည်းတွင်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ရွေးချယ်ရန်ကောင်းနိုင်သည်။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်, ဒါကြောင့်သင်ပြproblemsနာများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဝယ်ယူမှုနှင့်ကြော်ငြာများအတွင်း၌ရှိသော်လည်း၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
လိုင်း- ဖုန်းခေါ်ဆို၍ စာတိုပေးပို့ပါ။
ဝါယာကြိုး - လုံခြုံရေးဆိုတာကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားဖြစ်တယ်
ဤဒုတိယလျှောက်လွှာသည်စျေးကွက်အတွင်းရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့်သင်နှင့်များသောအားဖြင့်အသံထွက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများ၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိ WhatsApp ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Skype ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူကဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်, Janus Friis ။ ၎င်းသည်ဆွစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်နောင်တွင် WhatsApp ကိုဖုန်းအသစ်များတွင်မသုံးနိုင်ပါကမူအခြေခံအားဖြင့် Huawei ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိပါ။
အသုံးပြုသူများစွာကြိုက်နှစ်သက်စေမည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းရှိသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက်သည်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်မျှဝေခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်သင့်တွင်အီးမေးလ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ application ထဲမှာကတည်းက alias ကိုသုံးပြီးဆက်သွယ်တယ်။ Telegram မှာတွေ့ရသလိုပါပဲ ကျနော်တို့ကဖျက်လိုဖျက်ဆီးသတင်းများပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ download သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအတွင်း၌ကြော်ငြာနှင့် ၀ ယ်ခြင်းမရှိပါ။
Skype သည် Microsoft ၏ messaging application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းထင်ရှားသည် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုလွယ်ကူခြင်းအခြားအသုံးပြုသူများထံသို့မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ခြင်း၊ အုပ်စုများဖန်တီးခြင်း (WhatsApp တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်) ပင်ဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ် Emoticons သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုခုကိုပေးပို့ပါ (ဗီဒီယိုများ၊ ပုံများ၊ စာသားများ ... ) ။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သည့်အသုံးပြုသူနှင့်မျှမရှုပ်ထွေးစေဘဲဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးရှိလိမ့်မည်။
Skype ၏အားသာချက်မှာသုံးစွဲသူများစွာသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်၎င်းကိုတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စာအဆက်အသွယ်စာရင်းရှိလူအများအပြားကိုဤစာတိုပေးပို့ခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအက်ပ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
သို့သော်အခြား messaging အက်ပလီကေးရှင်းများမှအမြဲတမ်းတိုးတက်မှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၎င်း၏လူကြိုက်များမှုနှင့်အသုံးပြုမှုမှာလျော့နည်းလာခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၎င်းသည်သန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများအသုံးပြုသည့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲပင် သင်ထိရောက်သောဝေးလံသောဆက်သွယ်ရေးအတွက်သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်.
အနည်းငယ်မျှသာရှိသော်လည်း Telegram နှင့် Facebook Messenger တို့သည် WhatsApp အတွက်အခွင့်အလမ်းများဆုံးဖြစ်သည်.
ဤအတောအတွင်း Telegram ဆက်လက်ကြီးထွားနေပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကပြိုင်ဘက်များထက်ပိုကောင်းသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကတန်းတူအခွင့်အရေးနဲ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင်ဤအသုံးချပရိုဂရမ်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုခုကိုအများဆုံးအသုံးပြုသည်ထက်ပိုနှစ်သက်ပါသလား။ သင်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားတ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုပါသလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Whatsapp » WhatsApp ကိုအခမဲ့နှင့်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ၆ ခု
* Google + * ၎င်းသည်တက်ဘလက်၊ မိုဘိုင်းနှင့်ကွန်ပျူတာများတွင်တစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီးလူ ၁၀ ဦး အထိဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောရန်၊ အုပ်စုများဖွဲ့ရန်၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများပေးပို့ရန်၊ ဖြစ်ရပ်များကိုစီစဉ်ရန်၊ မည်သည့်အသုံးပြုသူသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုလိုက်နာရန်၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းရန်၊ သင်၏ဓာတ်ပုံများ (၂၀၄၈ × ၂၀၄၈ ပစ်ဇယ်အထိ) နှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ၎င်းကိုလက်ကိုင်ဖုန်းမှချက်ချင်းအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ သင်လိုချင်သူများနှင့်မျှဝေပါ။ ဂိမ်းများကို PC တွင်ကစားနိုင်သည်။
Sabas Escobar Zayas ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
။ အတိအကျပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤပြissuesနာများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်၊ သာမန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးဖြစ်သည်၊ အချို့မှာတစ်ခုခုပျောက်ဆုံးနေသည်၊ အခြားသူများကအလွန်နှမြောသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသော (သို့) ၁၀၀% အသုံးမ ၀ င်သောအချက်ဖြစ်သည်။ "နေစဉ်" ကျွန်ုပ်သည် Google Talk, Hangouts နှင့်အခြားဂူဂဲလ်အပေါင်းကိရိယာများကိုအစဉ်အမြဲအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးကျွန်ုပ်၏အခြားမိသားစု၊ ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသောနေရာမှဝေးသောနေသူငယ်ချင်းများနှင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်နိုင်ပါ။
WhatsApp, Viber, Wechat, Skype, Line ကိုတပ်ဆင်ရန်သူမကို (Google Talk မှတစ်ဆင့်) တောင်းဆိုသောအခါကျွန်ုပ်၏အစ်မသည်ကျွန်ုပ်ကိုသဘောပေါက်စေခဲ့သည်။ ဘယ်နှစ်ခုကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုငါတို့ဘယ်လိုစမ်းသပ်နိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ခဲ့ပါ။ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နဲ့ပီစီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ သူမကကျွန်တော့်ကို“ မင်းဘယ်လောက်ရှာဖွေနေလဲ၊ ငါတို့ဆက်သွယ်နေပြီမဟုတ်လား။ လာကြ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစကားပြောရန်၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တွေ့ပြီးရေးခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဗီဒီယိုကိုနှိပ်ပါ။
ယခုမှာကျွန်ုပ်သည်ထိုအက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးကို uninstall လုပ်ပြီးသားဖြစ်သည်။ သူတို့ကမကောင်းသောကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည့်အရာ၊ ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသောလူများနှင့်အဆက်မပြတ်ရှိနေရန်လိုအပ်သည်။ ဖက်ရှင်သည်အဘယ်အရာကိုကြိုးစားဘို့သဘောပေါက်ဘူး။ မင်္ဂလာပါ
Sabas Escobar Zayas အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်အတွက် ChatOn သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
1- SAMSUNG မှပြုလုပ်ထိန်းသိမ်းထားသည်
၂-၁၀၀% အခမဲ့၊ သူတို့သည်သင့်အားစတစ်ကာတစ်လုံး (လိုင်း cobra စတစ်ကာများ) ကိုတောင်အားမသွင်းပါ။
3- ပလက်ဖောင်း (ဥပမာ spotbros သည် android နှင့် iphone သာဖြစ်သည်)
4- web client (လိုင်းတွင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သော desktop client တစ်ခုရှိသည်)
- ဒါကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မဟုတ်ပါ၊ သင်သိအောင်လုပ်ရန်လိုသည်။
Spotbros ကိုကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်သည်မှာသေချာသည်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်လုံခြုံရေးသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သူတို့မှာ desktop ဗားရှင်းနဲ့ WindowsPhone ဗားရှင်းစီစဉ်ထားတယ်။
သုံးစွဲသူများစွာက၎င်း၏ရှုပ်ထွေးသော interface ကိုတိုင်ကြားသော်လည်းအလွန်ကောင်းသော application ကိုသံသယမရှိဘဲ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Line ကမသုံးပါဘူး၊ ဘက်ထရီရဲ့ ၅၀% ကိုအသုံးမပြုဘဲစားတယ်၊ ၇၀% ကိုသုံးတယ်။ ၇ နာရီတိုင်းမှာအားသွင်းမယ့်အစား၊ ငါ့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကို ၂ ရက်လောက်ဖွင့်ထားတာကိုပိုနှစ်သက်တယ်။
AirDrop ဆိုတာဘာလဲ၊ Android အတွက်အခြားနည်းလမ်း ၅ ခု